Soo dejisan KaraFun Player 2.6.1.1 – Vessoft
WindowsMultimediaCiyaartoyda warbaahintaKaraFun Player
Bogga rasmiga ah: KaraFun Player
KaraFun Player – ciyaaryahan karaoke oo ay taageertaa qaabab music caan ah. software ka kooban maktabad weyn ee songs qaybiyey noocyo kala duwan, dadka iyo luqadaha. KaraFun Player u saamaxaaya in ay qabsato Isbadalo of tracks, bedesho dhawaaqa sare iyo dib vocals, text view, la playlists shaqeeyaan, bedesho Nuurkii asalka, iwm KaraFun Player taageertaa hab gaar ah si uu u furo suuqa kala ah karaoke dheeraad ah oo ay u guuraan ah monitor dibadda ama video-borojektar. KaraFun Player sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad ku darto oo loo maqli gaar ah kuwan raadkaygay karaoke aad.
Dad badan oo kuwan raadkaygay tayada studio-
Taageerada qaabab kala duwan music
Qabsashada ah laxanka gabaygii
hab screen Dual
hagaagsan offline of tracks
Soo dejisan KaraFun Player
Faallo ku saabsan KaraFun Player
KaraFun Player Xirfadaha la xiriira